Nhau - Pakarepo: India's graphite electrode mitengo ichawedzera ne20% mukota yechitatu.
Pakarepo: India's graphite electrode mitengo ichawedzera ne20% mukota yechitatu.
Sekureva kwemishumo yazvino kubva mhiri kwemakungwa, mutengo we UHP600 mumusika we graphite electrode muIndia unokwira kubva pamakumi maviri nemakumi mapfumbamwe emazana rupees / ton (3,980 US dollars / ton) kuenda ku 340,000 rupees / ton (4670 US dollars / ton). Nguva yekuurayiwa kubva muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu 21.
Saizvozvowo, mutengo weHP450mm electrode unotarisirwa kukwira kubva parizvino mazana maviri nemakumi mairi nemaviri rupees / ton (3090 US dollars / ton) kusvika 275,000 rupees / ton (3780 US dollars / ton).
Chikonzero chikuru chekuwedzera kwemutengo nguva ino kuwedzera kwemutengo wecoke coke kubva kunze kwenyika, kubva paUS $ 1500-1800 / ton kusvika pari zvino kudarika US $ 2000 / ton muna Chikunguru 21.
Post nguva: Jun-17-2021